Rakkina godaansaa: Gamtaan Awurooppaa karoora godaansaa baase - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa Karoorri koolugaltootaaf karaa nagaa fi seeraatiin akka Awurooppaa galan taasisu kun Afriikaa irratti xiyyeeffannaa haaraa akka taasisu, Komiishinichi dubbata.
Komiishiniin Gamtaa Awurooppaa (EU)n yoo xiqqaate koolugaltoota 50,000 gara Awurooppaatti fiduuf sagantaa waggaa lamaa haaraa dhiyeesse.
Sagantaa kanaanis lammiileen gaanfa Afriikaa fayyadamtoota muummee ta'u jedhame.
''Kunis osoo tarkaanfii yeroo ariifataa osoo hin taane, waa'ee haala to'annaa dhimma baayyee walxaxaa fi caasaa amma keessatti argamnutii,'' jedhaniiru Federikaa Mogheriinii, Pirezidaanitiin itti aanaa komiishinichaa.
Dhimmi kunis walitti dhufeenya biyyoota 28 Gamtaa Awurooppaa keessaa wal mormisiisee jira.
Sagntaan waggoota lamaa Roobii xumurameenis godaantoota 160,000 qofa bakka haaraatti dabare.
Motummoonni bahaa heduunis karoora qubsuma dirqamaa irratti kan maman yoo ta'u, himannaan seeraa Polaandii fi Haangaariin dhiyeefatanis jalqaba baatii kanaatti mana murtii haqaa Awurooppaatiin didameera.
Karoorri qubsamaa gara xumuraatti dhufaa jiruu kunis to'annaa adeemsa godaantoota 1.7 karaa galaanaatiin bara 2014tti Awurooppaa galaniitif yaalii xumuraati.
Goodayyaa suuraa Karoorri haaraan kunis daddeebiftoota yakkaa jireenya godaantootaa balaa rratti kufiisaa jiraniif filannoo nagaa dhiyeessuu irratti kan xiyyeefateedha.
Karoorichi seera Awurooppaa kana dura godaantonni biyya seensa Awurooppaatti kolu galtummaa gaafachu qabu jedhu deegeera. Seerri sunis biyyoota akka Xaaliyaanii fi Giriik kan qarqara galaanaa jiran irraatti dhiibbaa haalicha to'achuu umee ture.
Qondaaltoonni EU akka jedhanittis, karoorri qubsama baayyina namoota tilmaamamee kan fiixaan bahu dadhabeef irra caalaa, sababii waliigaltee Eu fi Turkii jidduutti baqqattoota Libiyaa rraa dhufan xiqqeessuf taasifameedha. Akkasumas, irra caalaan godaandtoota dhiheenya biyyoota irraa dhufan ammoo kan ulaalaa sagantaa qubachisu hin gunnee ta'usaaniti.
Karoorri haaraan waggoota lamaa komishinichaa kunis namoota balaaf saaxilaman 50,000 gara Awurooppaatti fida. Adeemsa kanaanis jiddu galli bahaa fi Turkii akkuma duraa yoo ta'u, Afiriikaa Kaabaa fi Gaanfa Afrikaa irratti garuu xiyyeefannaa haaraan akka taasifamu dubbatama.
"Kunis yaalii Komishinnichi namoota lubbu isaanii harka networkii dadabarsitoota yakkaatiin balaaf saaxilamaa jiruuf filanno biraa taasisuudha,'' jedheera.
Jechuutarratti yaadannoo: BBCn jecha godaanaa jedhu kan fayyadameef namoota adeemsa gaaffii kolu galtummaa seeraa jiran hundaafii dha. Garee kunis namoota biyyoota waraa baqatan kan aaka Siriyaa kanneen sadarkaan kolu galtunnaa kennamuuf danda'u, akkasumas namoota hojii fi jireenyaa foyya'aa barbaadan kan dabalatuudha.
'Okkora alaabaa Finfinnee yeroo dabreen 28 lubbuu dhaban' poolisii
Dooniin lubbuu baraartu hayyama dhowwamte
Somaliyaatti nama jiraatti gubatee fi odeessaalee gaggabaaboo biroo
Saamtoonni galaanarraa imaltoota butan
Garee cimaa torban kanaa keessa taphattoota warra kamtu jira?
Tapha pirimerligii Ingiliziin torban kanaa eenyu mo'ata jettu?
Qorichoota talaallii dirooniin imalan